पैसा फिर्ता माग्न आउने सँग काम नगर्ने सलमान खानको घोषणा ! - Namasteholland, News, Information and Technology
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १०:०८0
बलिउड अभिनेता सलमान खानले अब पैसा फिर्ता माग्न आउने निर्माता र बितरक सँग काम नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
चलचित्र ट्युबलाईट बक्स अफिसमा फ्लप भएपछि सलमानले यो फिल्मका बितरकहरुलाई चलचित्रले गरेको नोक्सानको पचास प्रतिशत रकम फिर्ता गरेका थिए ।
यो ब्यापारको कस्तो सिस्टम हो ? लगातार १५ ओटा फिल्म हिट हुँदा कमाएको हिसाब नगर्ने तर एउटा फिल्म फ्लप हुँदा पैसा माग्न घर सम्म आउने, उनले पछिल्लो समय एउटा टेलिभिजनलाई अन्र्तवार्ता दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
बितरकको किचलोबाट आजिद भएका सलमान चलचित्र रेस ३ बाट आफै बितरक पनि बन्दैछन् । यसै क्रममा उनले आफै प्रोड्युसर आफै बितरक भएपछि घाटा पनि आफै बेर्होने र नाफा पनि आफै खाने र कसैको किचलो सुन्नु नपर्ने पनि बताएका छन् ।
१७ माघ २०७५, बिहीबार १२:०४0
लामो समय पछि ऋचा घिमिरेले निर्माण गरेको चलचित्र 'तुलसी' प्रदर्शन हुने भएको �
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०८:५२0
गायिका अञ्जु पन्त र अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका गायक बिन्तीकुमार गुरुङको स्�
५ माघ २०७५, शनिबार १०:५३0
युरोपका बिभिन्न ठाउँ ठाउँ मा गाउदै आफ्नो छुटै पहिचान बनाइसकेका गायक- तुलस�